‘कबीर सिंह’ ले बक्स अफिसमा मच्चायो धमाका, कति कमायो ? « Khabarhub
‘कबीर सिंह’ ले बक्स अफिसमा मच्चायो धमाका, कति कमायो ?
बलिउड अभिनेता शाहिद कपूर स्टारर फिल्म ‘कबीर सिंह’ ले दर्शकको मन जितेको छ । तर, केही दर्शकले भने यो फिल्मलाई वाहियात फिल्म पनि भनिरहेका छन् । केहीले फिल्ममा राखिएका संवादलाई लिएर समेत नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
आइतवार फिल्मले त्योभन्दा पनि बढी व्यापार गरेको छ । आइतवार यो फिल्मले झण्डै २७ करोड ९१ करोड बराबरको व्यापार गरेको छ ।
सोमवार पनि फिल्मले राम्रो व्यापार गरेको छ । सोमवार मात्र फिल्मले १७ करोड ५४ लाख बराबरको कमाइ गरेको हो ।
प्रकाशित मिति : १० असार २०७६, मंगलबार ४ : २२ बजे